FBC - Shaampiyoons liigichaan Cheelsii fi PSGn galchii bal’aan injifataniiru
Shaampiyoons liigichaan Cheelsii fi PSGn galchii bal’aan injifataniiru
Finfinnee, Fulbaana 3,2010(FBC)- Shaampiyoons liigii Awrooppaa kaleessa galgala gaggeeffameen Baarsaan Yuuveentuus yammuu injifatu, PSG fi Cheelsiinis garaagartee galchuu bal’aan injifataniiru.
Laaliigaa torbichaatin haatriikii kan hojjete Meesiin, galgala galchii lama kan gumaache yammuu ta’u, tabataan Krooshiyaa Raaktiich ishee hafte itti dabaleera.
Spoortiing Liizban gara Griik qajeelee Olompiyaakoons 3f 2n injifateera.
Ramaddii 1ffaa keessaa Maancheestar Yuunaaytid Ooltiraafoorditti Baazeel 3f 0n injifateera.
Beenefiikaan dirree ofiirratti kilaba Ruusiyaa CSKA Mooskoon 2f 1n injifatameera.
Buundasliigichaan Hoofnaayimitti 2f 0n kan injifatame Baayar Muuniik, Aliyaanz Areenaatti Aandarleekt Beeljiyam 3f 0n yoo injifatamu, Loowaandoowiskii, Tiyaagoo Alkaantiraa fi Jooshiwaa Kiimiichibaan galchiiwwan gumaachaniiru.
Gara Iskootlaand Seeltiik kan qajeele PSGn Seeltiik Paarkin galchii quufera.
Roomaa fi Atleetiikoo Maadriid 0f 0n adda ba’aniiru.
Chaampiyoons liigichaan taboonni ramaddii jalqabaa har’a galgala itti fufu.
Ramaddii 5ffaan Liivarpuul Seeviyaa keessummeessa.
Kilabni Slooveeniyaa Maariiboor Spaartaak Mooskoo keessummeessa.
Maancheestar Siitiin ramaddii 6ffaan Feeynoord waliin tabata.
Poortoon Beeshiiktaashin, RBn Laayibziish Moonaakoon ramaddii 7ffaan walargu.
Riyaal Maadriid Appaayil Niikoosiyaan Beernaabootti keessummeessa.
Tabni Tootinhaam Hootispar Boorsiyaa Doortmuundin gaggeessus har’a galgala ni eegama.
Taboonni hundi galgala sa’aa 3 fi 45tti eegalu.
Oduuwwan Biroo « Garee Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa 16ffaa irratti hirmaatee beekamtii fi badhaasni kenname	Qiddus Giyoorgis lammii Poorchugaal Maanu’eel Vaaz Piintoo leenjisaa kilabichaa haaraa godhee muude »